မော်ကွန်းတိုက် traintips | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ ရက်အနည်းငယ်ကွာလာပြီစဉ်းစား? အဘယ်အရာကိုအချို့သောနေ့ကခရီးစဉ်ပဲရစ်ကနေရထားနဲ့သွားဖို့စီစဉ်အကြောင်းကို? ပြင်သစ်ရထားတစ်ဦးအစာရှောင်ကြသည်, လွယ်ကူသော, နှင့်ပြင်သစ်တွင်ပတ်ပတ်လည်ပတ်ပတ်လည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် - ဖော်ရွေလမ်း. ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်အတူ, သငျသညျမိနစ်အတွင်းစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ အဘယ်သူသည်လာသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှပိုက်ဆံကယ်တင်လိုပါဘူး, အထူးသဖြင့်အားလပ်ချိန်မှာ? ခရီးသွားလာစျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့် Save ကိုတစ်ဦးကရထားနှင့်သင်၏ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီဖြင့်စီစဉ်နေဖြင့်, သငျသညျကုန်ကျစရိတ်ခေါ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်. ဤအနှင့်အတူခရီးသွားနေချိန်မှာပိုက်ဆံ Save 10 အပေါ်အကြံပေးချက်များ…